सलमान खान सेन्डो लगाएरै बहिनीको विवाहमा पुगेपछि…. « Light Nepal
सलमान खान सेन्डो लगाएरै बहिनीको विवाहमा पुगेपछि….
Published On : 30 May, 2019 7:20 pm
मुम्बई। बलिउड अभिनेता सलमान खान फेरी एक पटक चर्चामा आएका छन् । उनी आफ्ना फिल्महरुमा सर्ट खोल्न र शरिर प्रदर्शन गर्न प्रसिद्ध मानिन्छन्। उनी प्राय फिल्महरुमा ‘सिक्स प्याक’ अन्दाजमा देखिएको त दर्शकका लागि नौलो होइन ।
तर, हालै सलमानको एक विवाह भोजमा सेन्डो गञ्जीमात्रै लगाएर देखिएको फोटो भाइरल बनेको छ। सलमान ९ वर्षअघि अभिनेत्रीबाट राजनीतिक नेता बनेकी बीना काकाकी छोरीको बिहेमा सेन्डो गन्जीमात्रै लगाएर पुगेका थिए। बीनाले इस्ट्राग्राममा छोरीको बिहेको पुरानो फोटो पोस्ट गरेपछि सलमान चर्चामा आएका हुन्। जहाँ सलमान सेतो रंगको सेन्डो र जिन्स पाइन्ट लगाएको देखिन्छ । त्यस्तो ड्रेसमा उनले चस्मा र टोपी पनि लगाएका छन्।
यस्तो अवतारमा पुगेका उनले पछि सर्ट र ट्राउजर लगाएका थिए। बीनाले सलमानसँग ‘मैने प्यार क्यू किया’ र ‘गड तुसी ग्रेट हो’जस्ता हिट फिल्ममा एकसाथ काम गरेकी छन्। सलमान बीनाकी छोरीलाई आफ्नो बहिनी मान्छन्। कांग्रेस नेता बीनाले बलिउडका थुप्रै फिल्ममा चरित्र अभिनेत्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।
मेलिनाको ‘राम राम तिम्रो कसम’ गीतमा, समीरको दमदार अभिनय (भिडियो)
दिपक ओलिको शब्द संगित रहेको अनि गायिका मेलिना राई र गायक प्रेम राइको स्वर रहेको
को हो शिल्पाको पहिलो श्रीमान ? खुलासा गर्दै आए कलाकार किशोर खतिवडा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । पछिल्लो समय एउटा पारीवारीक झगडाले निकै चर्चा कमाएको छ । पछिल्लो तीन वर्ष
‘प्रेम गीत ३’ मा पुरा भए सबै कलाकार : अनुभवको जोडीमा देखिनेछन् समृद्दी
काठमाडौं । यो वर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत–३’ मा समृद्धी शाही ‘ठकुरी’ पनि जोडिएकी छन् ।
यस्ता कलाकार जसले समाजलाई नराम्रो असर पुर्याउँछ भन्दै करोडौंको विज्ञापन अस्वीकार गरिदिए
एजेन्सी । कलाकारको काम मनोरञ्जन दिनु मात्र होइन । कलाकार समाजको लागि वाटो देखाउने एक